काम र कर्तव्यमा ध्यान दिउ, निरन्तरको प्रयासले प्रतिफल अबश्य दिनेछ - सुनाखरी न्युज
काम र कर्तव्यमा ध्यान दिउ, निरन्तरको प्रयासले प्रतिफल अबश्य दिनेछ
Posted on: October 21, 2021 - 8:12 pm
किरण गिरी – आजै फेसबुक बाल बाट संयोजन गरिएको सान्दर्भिक र रोचक प्रसंग हामी सबैका लागी उपयोगी हुन सक्छ। कसैले २५ वर्षमा विवाह गरेर १० वर्षपछि सन्तान प्राप्त गरे । कसैले ३४ वर्षमा विवाह गरेर १ वर्षमा सन्तान पाए । कसैले २३ वर्षमा Master Degree गरेर ११ वर्षपछि खोजेको काम पाए ।
कसैले ३० वर्षमा उच्च शिक्षा पूरा गरेर २ वर्षमै खोजेको काम पाए । कोही २५ वर्षमा कम्पनीको निर्देशक बने र ५० वर्षको अल्पायुमा नै मरे, कसैले सोही पद ५० वर्षमा पाए र ९० वर्ष सम्म बाँचे । भारतको समय अमेरिकाको भन्दा करिब १० घण्टा छिटो छ, तर यसले अमेरिका ढिला छ भन्न मिल्दैन । ओबामाले ५५ वर्षमा दुइ / दुई अमेरिकी रास्ट्रपति कार्यकाल सक्काएर अवकाश पाए जबकी ट्रम्पले त्यही काम ७० वर्षपछि गरे त्यो पनि एक पटक मात्रै ।सबैजना आफ्नै समयमा हुन्छन । कोहि पछाडी त कोहि अलिक अगाडि । कहिल्यै आफू लाई अरु संग तुलना नगर्नु । तपाईं हामी प्रत्येक यो संसारको स्वतन्त्र र सार्बभौम नागरिक हौं ।
अरुलाई देखेर आफ्नो जीवन दाँज्नुको कुनै अर्थ छैन । आफु निरन्तर सत्मार्गमा लाग्नुस, मेहेनत गर्नुस्, गन्तव्य आफै तय हुनेछ । बाटो घुमाउरो छ भनेर आधी बाटो हिडिसकेपछी पछाडी नफर्कनुस । छोटो बाटो जानलाई पनि त्यो आधी बाटो फेरि हिड्नु पर्छ । कैयौ चोट बन्चरोले काठमा हान्दा पनि नचिरिएको काठ अन्तिम चोटले चिरिन्छ । त्यस्तै तपाईको कुन प्रयास अन्तिम हुन्छ के थाहा ? काममा ध्यान दिनुस्, प्रतिफलमा हैन ।”निरन्तर काम गर्दै जादा प्रतिफल ले अबश्य संझौता गर्ने नै छ । खाचो छ केबल निरन्तरता ,धैर्यता र विनम्रताको निरन्तर सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा अगाडि बढौं सफलता ले हाम्रो अंग अंग चुम्ने छ ।
लेखन तथा संयोजन – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन ।
बहुप्रतिक्षीत मौद्रिक नितिको समीक्षालाई यसरी बिश्लेषण गरौं- ज्ञवाली
सन्दर्भ एकता महाधिवेशन राप्रपा : हिजो आज र भोली !!
नेतृत्व पुस्तान्तरण सँगै सशक्त सबल र सक्षम नेतृवको आशा
नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन किन र कसको लागी बुझ्न सकिएन ?